ေဝဠဳေက်ာ္ ကေတာ့ ” အစာအိမ္ မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ ခင္ဗ်ာခြဲစိတ္ရန္ မလိုေသးပါ၊ အဖု အႀကိတ္ အလုံး အသားပို အနာ ဒါဏ္ရာ မရွိ၊ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မေတြ႕ရ၊ အစာအိမ္ေတာ့ နီၿပီး ေရာင္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူ ကုရမယ္၊ ႐ိုး႐ိုးေရာင္တာလား ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္လားဆိုတာ အသားစ ယူၿပီး စစ္ေနပါတယ္ .စိတ္ပူေပးၾကသူမ်ား နဲ႔ သတင္းေမးၾကသူမ်ား အားလုးံအား ေက်းဇူးအထူးပါ…. ” ဆိုၿပီး ေျပာထားခဲ့ပါတယ္။
source: Wai Lu Kyaw Foundation ‘s facebook,CRD-Myanmar Load
ခွဲစိတ်ဖို့တော့ မလိုအပ်သေးဘဲ အစာအိမ်ကတော့ နီပြီး ရောင်နေတဲ့အတွက် အချိန်ယူပြီး ဆေးကုသရမယ့် ဝေဠုကျော်
ဝေဠုကျော် ကတော့ တစ်ချိန်က အနပညာလောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး အချိန်အတော်ကြာ အနုပညာလောကမှာ နေရာယူထားနိုင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဠုကျော် ကတော့ သူပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူပဲ ဖြစ်ပြီး ယခုမှာတော့ အနပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နည်းပါးနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဠုကျော် ကတော့ ယခုမှာ ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလဲ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်နေသူပဲ ဖြစ်ပြီး အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ သွားရောက်ကူညီပေးနေပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဝေဠုကျော်တစ်ယောက် နေမကောင်းဖြစ်နေပြီး ခွဲစိတ်ဖို့တော့ မလိုအပ်သေးဘဲ အစာအိမ်ကတော့ နီပြီး ရောင်နေတဲ့အတွက် အချိန်ယူပြီး ဆေးကုသရမယ့်အကြောင်း ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
ဝေဠုကျော် ကတော့ ” အစာအိမ် မှန်ပြောင်း ကြည့်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာခွဲစိတ်ရန် မလိုသေးပါ၊ အဖု အကြိတ် အလုံး အသားပို အနာ ဒါဏ်ရာ မရှိ၊ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ မတွေ့ရ၊ အစာအိမ်တော့ နီပြီး ရောင်နေတဲ့အတွက် အချိန်ယူ ကုရမယ်၊ ရိုးရိုးရောင်တာလား ဗိုင်းရပ်ကြောင့်လားဆိုတာ အသားစ ယူပြီး စစ်နေပါတယ် .စိတ်ပူပေးကြသူများ နဲ့ သတင်းမေးကြသူများ အားလုးံအား ကျေးဇူးအထူးပါ…. ” ဆိုပြီး ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
” အမာခံပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးျခင္းသာမက အေရျပားေပၚမွာပါ ပံုေဖာ္အားေပးျခင္း ခံလိုက္ရတဲ႕ ေဒါင္း “